iPhone ဖြင့်ကြာရှည်ထိတွေ့နိုင်သောဓါတ်ပုံများကိုဘယ်လိုရယူမလဲ အိုင်ဖုန်းသတင်း
မိုဘိုင်းကင်မရာသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီတောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်ကိုင်ဖုန်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံစွမ်းရည်လည်းပျောက်သွားတယ် crescendo ၌တည်၏။ ဖြစ်ကောင်းပေမယ့်, ဒီအပိုငျး ပိုပြီးကျော်ကြားမှုဟာဆိပ်ကမ်း၏အဆုံး၌အောင်မြင်ခဲ့သည်.
iPhone သည်ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်အခါဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးသောကွန်ပျူတာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၌ iPhone 6S ထပ်မံပါရှိပါကထိုထက်ပိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမော်ဒယ်လ်မှာ "Live Photos" လို့လည်းလူသိများတဲ့ကာတွန်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့နည်းအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်မတို့ကိုပေးခဲ့လို့ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, iOS 11 ကိုဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူဤဖမ်းယူမှုများသည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုယူခဲ့ပြီးသက်ရောက်မှုအသစ်များကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူတို့ထဲကတစ်ခုကကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယခု မှစ၍ အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်များကိုရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
2 ပထမအချက် - Live Photos option ကို activate လုပ်ခြင်း
3 ဒုတိယအချက် - အဲဒီပုံကို Photos မှာရှာပါ
4 တတိယနှင့်နောက်ဆုံး - ပုံကိုဖွင့ ်၍ ရှည်လျားသောထိတွေ့မှု filter ကိုအသုံးပြုပါ
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းပညာကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ထို့အပြင်ရိုက်ချက်ကိုရိုက်ခြင်းတွင်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရာရှိသည်။ ဓာတ်ပုံပညာ၏အဆင့်မြင့်ဆုံးအသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေတာကိုသေချာပေါက်သိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ ဓာတ်ပုံကင်မရာတွေဟာသူတို့ရဲ့ယန္တရားရဲ့အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူတယ်ဆိုတာသင်သိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်ဒီနည်းပညာကရဖို့ပါ ကျနော်တို့ရှပ်တာခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါကင်မရာရှပ်တာပိုပြီးနှေးကွေးစွာပိတ်။ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုအမြဲတမ်းရွေ့လျားစေပြီးပုံတစ်ပုံတည်းဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤသည်ဒီကဗျာရလဒ်များကို။
ပထမအချက် - Live Photos option ကို activate လုပ်ခြင်း
ဤရှည်လျားသောထိတွေ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို iPhone အတွက်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမည့်အရာမှာ Live Photos option ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင်တော့ရိုက်ချက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းမြင်လိမ့်မယ် ၏ထိပ်ပေါ်မှာ app ကို ကွဲပြားသောအိုင်ကွန်များသည် iPhone ရှိ "ကင်မရာ" အောက်တွင်ရှိသည် "ငါးခုအတိအကျဖြစ်ဖို့။ "
အပေါ်ဆုံးအလယ်၌သင်တို့ကွဲပြားသောစက်ဝိုင်းများပါသောအိုင်ကွန်တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အောက်ဘက်ရှိအမှတ်အသားတစ်ခုဖြင့်အဝါရောင်ဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ Live Photo mode ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားကြောင်းညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ယခုတွင်သင်သည်အာရုံစူးစိုက်။ ပုံရိပ်ဖမ်းယူမှုကိုနှိပ်ပါ။ သူကဒီဖမ်းယူမှုမှာလှုပ်ရှားမှုရှိရမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငါတို့ဓာတ်ပုံထဲမှာဖမ်းယူနိုင်မယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်သင်သည် static element များအားလုံးနှင့်အတူရှုခင်းတစ်ခုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပါက iPhone သည်ဤရိုက်ချက်တွင်ရှည်လျားသောထိတွေ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အခုဆိုရင်ယာဉ်အသွားအလာတွေအများကြီးရှိတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်လိုက်ရင်ညဘက်မှာပိုပြီးအံ့ will ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူရှည်လျားသောထိတွေ့မှုဓာတ်ပုံရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် iPhone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအခြေခံထားသည့်အခြေခံသည်ကောင်းမွန်သင့်သည်။
ဒုတိယအချက် - အဲဒီပုံကို Photos မှာရှာပါ
ကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းယူပြီးသည်နှင့် iPhone ၏ "ဓါတ်ပုံများ" လျှောက်လွှာကိုသွားရန်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်။ အောက်ခြေတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ဓာတ်ပုံများ, အမှတ်တရများ, shared နှင့်အယ်လ်ဘမ်များ။ ငါတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဒီနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ။ အတွင်းပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားသောဖိုလ်ဒါများရှိပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုအား“ Live Photos” ဟုခေါ်လိမ့်မည်။
အတွင်းပိုင်းတွင်ဤတက်ကြွသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ရိုက်ယူထားသောဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်အခြားသူများအားလုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သတိထားပါ၊ အကယ်၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောဓာတ်ပုံများစွာကိုမရိုက်ပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော menu မှဓာတ်ပုံများလျင်မြန်စွာတွေ့ရမည်။ ငါတို့ဖွင့်လိုက်ရင်၊ ငါတို့အဲဒီပုံရိပ်ကိုအရင်ရလိမ့်မယ်။
တတိယနှင့်နောက်ဆုံး - ပုံကိုဖွင့ ်၍ ရှည်လျားသောထိတွေ့မှု filter ကိုအသုံးပြုပါ
ငါတို့လိုချင်သောရလဒ်ရရှိရန်တစ်လှမ်းသာဝေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသည့် Live Photo ကိုဖွင့်ပြီးသောအခါ၎င်းကိုအခိုင်အမာနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းများပြန်လည်ရှင်သန်လာလိမ့်မည်။ ပုံကိုနှိပ်နေစဉ်၊ မီနူးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ အတိအကျ, Live Photo တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။ နောက်လာမည့် Live, Buble, Bounce နှင့် Long Exposure.
သင်စိတ်ကူးပြီးပြီဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစေသည်။ ကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် ဒီပုံကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါလိမ့်မည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံများကိုထိမှန်ခဲ့ပါကသင်၏ရလဒ်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်မျှဝေခြင်းကိုခံထိုက်ပေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iPhone နှင့်အတူကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုဓါတ်ပုံများကိုဘယ်လိုရမလဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်မသိဘူး၊ မနက်ဖြန်ကြိုးစားမယ်။
3D sensor များသည်လာမည့်နှစ်တွင် Android terminal များသို့ရောက်ရှိမည်